A amancane Belarusian isikali edolobheni wesifunda ikhona zemigwaqo imigwaqo eminingi, ujantshi komgwaqo. Kwake kwathi kufanele ngokuthi isikhungo nodal. Edolobheni Orsha amahhotela zitholakala ezingxenyeni ezahlukene kube lula izivakashi kanye nokuzikhethela komthetho.
Orsha: ezinye izibalo
Kodwa okokuqala mayelana nomuzi. Kuyinto idolobha elikhulu elinabantu abakhileyo 140,000 okwamanje. Umsuka nomlando wayo kunezimpande esikhathini eside esadlulako. Ngokokuqala ngqá mayelana emzini ohlala kuso kuyakhulunywa ngaso "Tale of esidlule Iminyaka", sangomhla ngonyaka 667. Orsha, esemgwaqweni loMfula Dnieper. Umuzi ngoba republic esikhulu zezimboni kanye namasiko nge isiko eminyaka ubudala. Orshantsy - izakhamuzi eziningi zakuleli dolobha - ukuhlonipha nabo futhi uyaziqhenya ngomlando wabo.
Phakathi edolobheni kukhona amahhotela eziningana. Leli akulona "casemates itshe" nge amakamelo ezishibhile kwanikeza. Orsha amahhotela ube goodbye eside wethulele ezibizayo kwenkathi sezenhlalo. Amahhotela Orchies - amakamelo yesimanje nezindawo zokuhlala, okuyinto induduzo yabo akuyona wawungaphansi dolobha noma resort.
Orsha ngokuvamile iba maphakathi ezihlukahlukene imicimbi nemisebenzi emzini njalo babuthanela iqembu izivakashi, ukuthatha uhambo, amathimba. Izivakashi Orsha happy njalo futhi sizama ukuzijabulisa nabo ngokuya ukuzijabulisa nokuzilibazisa. Ngenxa yalezi zinjongo usebenza Orsha ehhotela. Kuyinto induduzo, induduzo futhi aziphumulele.
Ihhotela "Orsha" (3 izinkanyezi)
Umhlangano omkhulu kunayo yonke futhi ethandwa kakhulu ehhotela - "Orsha". Belarus uthanda futhi ehlonipha izivakashi. Ukuze ukuphumula zabo ngokuphelele inikeza nasezingeni eliphezulu of service, kuhlanganise yonke ingqalasizinda yaleli ehhotela ezintathu-star. Lena enhle esinezitezi ezingu-enkabeni yedolobha, elakhiwa ngo-1991 futhi kabusha ngo-2008.
Ukuze uhlale ku Ihhotela likuvumela 130 amakamelo lwezigaba ezahlukene futhi inkonzo. Phakathi kwabo kukhona: ayiwele naye, eyodwa, umndeni, "Lux" futhi omunye efulethini. Inani lemibhede: imibhede 224. Ukwakhiwa ehhotela "Orsha" has ikheshi, indawo yokudlela, bar, cafe, reception.
Uma ukukhokha esebenzayo ibhonasi izaphulelo, izinzuzo izingane abahlala engu-12. Inkokhelo yenziwe yezinhlobo ezahlukene ukubala. Izindleko ubuncane yokuhlala - $ 10 (cishe) ngelanga. Futhi efulethini kuyodingeka bakhokhe isizumbulu: cishe u- $ 60.
Mini-amahhotela nehhotela izakhiwo
Kukhona amahhotela emzini Orsha, plan. Kuyinto izivakashi izindawo zokungcebeleka. Lesi sakhiwo ihhotela endaweni besifunda ihlathi Zadneprovye nabadumile izivakashi isikhungo "Orsha" eduze nedolobhana Gryazilovka. On the indawo ngaphandle kwekamu ayatholakala izivakashi gazebos, ukosa inyama, sauna, yokupaka, pool, yokudlela kanye nightclub.
Ihhotela kwesitayela "Grand" ezithokozisayo izivakashi nganoma isiphi isikhathi sosuku. Lena isakhiwo esisha futhi ukhululekile ingqalasizinda ezifanele. Ihhotela inikeza yokupaka yokuthopha, ichibi, restaurant, bar, khulula inthanethi wireless.
Emkhakheni "Flax" kukhona ihhotela ekilasini umnotho. "Victoria" uJesu wazalwa ehhotela ngezamabhizinisi nabafundi. Lena evamile isakhiwo ezimbili storey nge amakamelo ezishibhile kungekho isevisi ezengeziwe.
City Orsha - amahhotela, amapaki, ukuvakasha, eziyinxanxathela, izimakethe, iminyuziyamu, eziteshini zesitimela, izitolo, salon, salon izinwele. Kodwa ngemuva kwakho konke lokhu - abantu, umsebenzi wabo futhi lokusungula.
Kuphi ukuba zihlale phezu kolwandle ebusika? izinkomba ezimbalwa kuze kube iholidi ngaphambi ephelele
Amapaki amanzi eTurkey - induduzo, ukuzijabulisa, ukufinyeleleka
City Cheboksary - lokho endaweni? ezikhangayo Cheboksary
Igama Funny sentombazane. Funny amagama. Amagama engenangqondo kakhulu emhlabeni
7 abathengisa, okuyinto njalo eziningi izikhala
Imicimbi Day Lwabantu Abakhubazekile: Kungani azigcine
I-puff pastry ne-shizi kanye nezinye izigcwaliso
Ukufakwa kophahla ebhodi lukathayela: ukulandelana yezenzo izinqubo ikakhulukazi